Wilfried Zaha Waa Iib!! Crystal Palace Oo Diyaar U Ah Inay Iibiso Xiddigeeda Wilfried Zaha & Sababta Oo La Ogaaday - Gool24.Net
Wilfried Zaha Waa Iib!! Crystal Palace Oo Diyaar U Ah Inay Iibiso Xiddigeeda Wilfried Zaha & Sababta Oo La Ogaaday
July 28, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
Crystal Palace ayaa diyaar u ah inay dhegaysato dalabyada laga soo gudbiyo xiddigeeda Wilfried Zaha oo ay saddex sannadood ka hadhsan yihiin heshiiska uu kula jiro kooxdiisa, hase yeeshee doonaya inuu ka tago kooxda.
27 jirkan ayaa la sheegay in kooxdiisu ay suuqa soo dhigayso, isla markaana ay qiime macquul ah ku iibin doonto, taas oo hanqalka ay ula soo kaceen kooxo ay ugu horreyso Everton oo uu tababaraheeda Carlo Ancelotti taageero u yahay laacibkan.
Everton ayaa hore looga diiday laba dalab oo ay kasoo gudbisay Zaha sannadkii hore, sidoo kalena naadiyo waaweyn oo ay ku jirtay Manchester United ayaa la tilmaamay inay aad u doonayeen adeegga ciyaareed ee xiddigan, hase yeeshee Crystal Palace ayaa xilligaas ku adkaysatay in aanay iibinayn.
Sida uu xaqiijiyey tababare Roy Hodgson maalintii Axadda, Palace waxay diyaar u tahay in laacibkeedan ay iibiso, waxaanay sababtu tahay in qaab ciyaareedkiisu is dhimay isla markaana ay ka muuqato niyad jab badan, waxaanu yidhi: “Way iska caddahay inay taasi saamaysay qaab ciyaareedkiisa oo toddobaadyadii ugu dambeeyey uu aad u liitay marka loo eego wixii uu qaban jiray. Waa xaalad u xun kooxda iyo isagaba, haddii uu go’aansado inuu tago. Haddii uu dareemo in aanu doonayn inuu naga sii mid ahaado, waxay noqon doontaa arrin xun.
“Anagu wali aad ayaanu u jecelahay, balse isaga kama dhigi karno sidayada oo kale, waana xaalad ay isaga iyo kooxda oo kali ahi xallin karaan, aniguna ma doonayo inaan ka jawaabo.”
Zaha ayaa kusoo biiray kooxdan isaga oo da’yar sannadkii 2010, waxaanu laba jeer oo ay sii dhacayeen ka caawiyey inay ku negaadaan Premier League, laakiin sannadkii 2013 ayuu uga wareegay Manchester United ka hor intii aanu sannadkii xigay ee 2014 ugu soo noqonin qaab amaah ah oo heshiis rasmi ah isku beddelay.
Xili ciyaareedkii 2018/19 waxa uu dhaliyey 10 gool, laakiin sannadkan ayuu aad u liitay iyadoo kaliya uu shabaqa soo taabtay afar jeer.
Kooxaha doonayay sannadkii hore, waxay ka dideen qiimaha waallida ah ee ay saxeexiisa ku xidhay Crystal Palace oo ahaa £100 milyan oo Gini, balse waxa la filayaa inuu aad uga jabnaan doono xagaagan.